Shirkadda qurxinta JOYO waa naqshadeeye iyo soo saare wax soo saarka qurxinta xirfadeed. Waxaan wada shaqeyn la leenahay qaar ka mid ah shirkadaha caanka ah ee isku qurxiyo iyo farshaxanada farshaxanka xirfadlayaasha ah ilaa 2005.
Waxyaabaha la isku qurxiyo waxaa ka mid ah Palettes xirfadeed oo xirfad leh, noocyo burush xirfadeed leh. Faahfaahinta badeecadaha waa Eye eye, Blush, Lip Gloss, Lipsticks, Powder Loose, Concealers, HD Liquid Foundation, Oil Free Liquid Foundation, Mascara, Eyebrow Powder, Liquid Eyeliner, Cake Eyeliner, Pearl Eye shadow, Sealers, Eyeshadow Primer, makeup Dib-u-hagaajinta, Bronzer, Compacts, Powder Powder iyo Shimmer Powder iwm .. Tayada wax soo saarka xirfadaheena qurxinta leh waxay la kulmaan heerka qurxinta xirfadeed. Kumanaan farshaxanno isku qurxiyo xirfadleyaal ah ayaa u adeegsada moodooyinkooda, waxay ku qancaan midabada wanaagsan ee ka muuqda sawir qaadista. Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan kuu xaqiijino isku-qurxinta tayada sare leh iyo qiimaha tartanka.
ALAABADA UGU FIICAN: Haddii aad rabto inaad iibiso HIGHT waxyaabaha kahooseeya ee tayada leh, alaabtayada ayaa ah xulashada kuugu fiican adiga. Waxaan soo saari karnaa waxyaabaha la isku qurxiyo sida aad codsato.
Haddii aad bilowdo ganacsi kuu gaar ah oo ku saabsan aagga is qurxinta, ama aad rabto inaad dhisto noocyo kuu gaar ah, waxaan ku daabacan karnaa astaantaada ama sumaddaada alaabteenna.
ADEEGYADA UGU FIICAN: Waxaan leenahay khibrad badan oo aan kuugu diyaarino wax soo saar iyo naqshadeyn adiga. Waxaan kuu diyaarin karnaa shixnad adiga sidoo kale. Waxa kaliya ee aad sameyso waa inaad dalbataa amar oo aad diyaarsataa lacag bixin iyo inaad sugto inta badeecadu kuu imaaneyso. Sidaa darteed, waxaad ku heli kartaa qurxinta si badbaado leh.
Haddii aad nooga baahato inaan ku taageerno bilowga, waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawinno. Sidaa darteed, waxaad ku gaari kartaa yoolkaaga waqti gaaban.
Waa lagusoo dhaweynayaa inaad dhisto iskaashi ganacsi oo saaxiibtinimo leh Beautydom. Fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Waxaan rajeyneynaa inaan helno baaritaankaaga. Dhib nagumagin inaad salaan sxb uun tidhaahdo!
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Matte Eyeshadow Palette, Liimiga Shimmer, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Lipstick yar, Burushka ugu Fiican, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Dhammaan Alaabooyinka